Depiote miisa 73 : Lasa mpampihorohoro? -
AccueilRaharaham-pirenenaDepiote miisa 73 : Lasa mpampihorohoro?
23/05/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tsy mijanona ho tolona madio intsony araka izay nolazaina hatramin’izay ny zava-mitranga etsy amin’ny kianjan’ny 13 Mai, fa lasa mivadika zavatra hafa. Toa lasa mampihorohoro ireo mpikambana ao amin’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana (HCC) mantsy ireo depiote milaza fa ho an’ny fanovana. Nandritra ny kabary nataony omaly no nilazany fa hitety ny tokantranon’ireo mpikambana rehetra ao anatin’io andrim-panjakana io ireo mpanao fihetsiketsehana izay tarihin’izy ireo. Kabary toa mampametra-panontaniana manao hoe: inona moa no teti-dratsy amin’izay fitetezana tokantranon’olona izany? Ny mahagaga ihany koa dia olona mpahay lalàna, no sady mpanao lalàna no manao izany fiteny mamohehitra izany eny imasom-bahoaka. Amin’ny maha depiote azy mantsy dia anisan’ireo mpanao lalàna ramatoa Christine Razanamahasoa. Amin’ny maha mpahay lalàna azy moa dia efa tsy miafina amin’ny rehetra fa napetraka ho minisitry ny Fitsarana nandritra ny Tetezamita ny tenany. Izao hiaraha-mahita izao anefa ny fiteny ataony, ary toa mahalasa ny eritreritra ihany ny amin’ny hoe iza àry no tena mamboly korontana sy mitarika ny fanitsakitsahana ny lalàna velona eto amin’ity firenena ity? Ny fitondrana vahoaka mampihorohoro isan’andro eny amin’ny lapan’ny HCC aloha dia efa tsy fanarahan-dalàna. Azo antoka mantsy fa fantatr’ity depiote ity fa tsy azon’ny mpitory atao ny manao tsindry amin’ny mpitsara hamoaka didy. Mila fahatonian-tsaina mantsy ny fandinihana ny antotan-taratasin’ady amin’ny tranga toa izao. Isan’andro anefa dia tamin’ny depiote Christine sy Hanitra Razafimanantsoa, izay samy mpahay lalàna mampihorohoro ireo mpikambana ao amin’ny HCC ireo mpomba azy.
Mitohy ankoatra izay ny fikarakarana fampisehoana ho an’ireto mpitarika ny hetsika eny amin’ny kianjan’ny 13 Mai ireto entina hanodinkodinana ny sain’ireo mpanara-dia azy ireo. Amin’ny fotoana toa itony mantsy dia tsy avela hisaina ny zavatra ampanaovina azy ireo mpanara-dia fa verezina amin’ny zavatra hafa ny eritreriny, ahatonga azy hanaraka hatrany ny hadalàn’ny mpitarika. Na izany aza, dia efa maro no tonga saina amin’ny fihetsika tsy maotina ataon’ireto mpitarika ireto. Misy mihitsy aza no efa nilaza fa ny hanakorontana ny firenena no tena tanjon’izy ireo ahafahany mahazo seza amin’ny fomba mora foana. Amin’izay fotoana izay, dia miakatra ny karamany sy ny tombontsoa raisin’izy ireo. “Izahay hatrany no hiafaran’ny rihitra eto” hoy ireto olona tonga saina ka tsy niverina teny amin’ny kianjan’ny 13 Mai intsony. Raha hiverenana tokoa ny zava-nisy taorian’ny tolon’ny 2009, dia maro ireo diso fanantenana tamin’ny mpitarika tamin’izany fotoana izany. Efa voaongana mantsy ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc vao tonga saina avokoa ny rehetra fa hay seza avokoa no tena nokendren’i Andry Rajoelina sy ny forongony tamin’izany, raha toa ka tena nitolona ho an’ny fanovana ny fiainam-pirenena avokoa ny vahoaka.
Naherin’ny 100 ireo tsy maintsy nomena seza, ka natao mpikambana tao amin’ny fahefana avon’ny Tetezamita (HAT) tamin’izany fotoana izany. Anjatony maro ihany koa ireo natao parlemantera tsy nandalo fifidianana. Ny vahoaka kosa dia samy namonjy ny tokantranony nanonitra ny fatiantoka nandritra ny tolona, fa tsy mba nisy nijery satria vita ny nilàna azy teny an-kianja.